Hlola iTransylvania, Romania - World Tourism Portal
Hlola iTransylvania, iRomania
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha eTransylvania
Bukela ividiyo ngeTransylvania
Hlola iTransylvania, isifunda esikhulu kunazo zonke Romania futhi cishe waziwa kakhulu. Lapho uvakashela iTransylvania ugxuma uhlanganiswe namasiko, imvelo nomlando. ITransylvania yisifunda esihlukile: kufanelekile ukuzama ukubona umehluko okhona esifundeni, ngokwamasiko nangokwemvelo. Lesi sifunda yindawo enomlando omningi nokuhlangana kwamasiko ahlukahlukene. Kuyo yonke iTransylvania ukuhlangana kwabantu baseRomania, abantu baseHungary, amaSaxon kanye namaRom kuyitimu ehamba phambili. ITransylvania inothile ngezinganekwane nezingosi zangezikhathi ezingamahemuhemu amabi: kukhona ngezinqaba nezinqaba ze-100 nangamabandla ama-70 aqinile. Omkhulu waseRomania futhi izinqaba ezilondolozwe kangcono futhi izinqaba zitholakala lapha. Kepha kumhambi onolwazi ngokwengeziwe, kunamadolobhana amaningi anezindlu ezindala namasonto aqinile. Njengoba iTransylvania izungezwe yizintaba zeCarlathian kunamahlathi amaningi ezintaba kanye nokuhamba izintaba noma amathuba okugibela. Kuyo yonke indawo yamaCarpathians kunezipaki zikazwelonke ezinhle. Maphakathi neTransylvania kukhona amagquma aluhlaza nemifula. Amadolobha amakhulu amaningi anjengeNtshonalanga Yurophu kakhulu, futhi ingqalasizinda ngokuvamile yinhle, ikwenza kube lula kubahambi.
Eningizimu-mpumalanga (Sibiu County, Brasov County)
Lesi sifunda, esineSibiu kanye neBrasov, sinemuva eliveziwe leSaxon. Ingenye yezindawo ezithandwa kakhulu ngabahambi ngenxa yokucebisa kwayo ezinqabeni (iRasnov, i-Bran), amadolobha amadala, amasonto avikelwe emizaneni ethandekayo (iBiertan, iValea Vilor, i-Prejmir) kanye namahlathi asezintabeni (iPiatra Craiului). Kuyikhaya nakwezinye izindawo zokuvakasha ezibaluleke kakhulu ze-ski (Poiana Brasov).
Isifunda esizungeze iSfantu Gheorghe, iMiercurea Ciuc neTargu Mures sinethonya elinamandla lesiko laseHungary. Izifunda iHarghita (Miercurea Ciuc) neCovasna (Sfantu Gheorghe) zaziwa nangokuthi iSzeklerland. Lapha ungathenga isinkwa esisha kanye neKürtőskalács kusuka endaweni yakini noma ubone ichibi laseSfanta Ana.
I-Hunedoara (Deva) ne-Alba (Alba Iulia) yizindawo ezibalulekile zomlando wesiko laseRomania. I-Alba Iulia kwakuyindawo lapho ukuhlangana kwezifunda zaseRomania kwenzeke khona. Kulesi sifunda ungabona iCorvinesti Castle enhle, amachibi, imihume nezinye izindawo ezinhle zemvelo. Amaphoyinti amakhulu we-retezat National Park atholakala lapha.
UCluj noBistrita Nasaud kunzima ukuchaza ngokwesiko elibaluleke kakhulu. ICluj Napoca iyunivesithi ebaluleke kakhulu nedolobha locwaningo. Futhi inezimpawu ezibalulekile zomlando namasiko. Eduze kwalo kukhona amadolobhana amahle (isiRomania, isiHungary nesiJalimane). Eduze kweTurda ungavakashela iTurda Canyon ebekekayo. IBistrita Nasaud idume ngamachibi ayo, imihume, izindawo zokungcebeleka zezempilo, kepha futhi nezindawo zomlando. IGihureelecu Şimleului nayo ikulesi sifunda.
Yize abanye abantu bangahlobanisa igama nezinganekwane zama-vampires anegazi (ukuhlelwa kwenoveli kaBram Stoker Dracula), ITransylvania ingesinye sezifunda zemvelo ezinhle kakhulu e-Yurophu ezinezindawo ezinhle, amadolobha ezinqaba zasendulo kanye nezindela. Amadolobha amahle anezakhiwo ezinhle ze-baroque anikezela ngezinsizakalo zokuvakasha zamanje ngenani eliphansi kakhulu kunalo, usho, Germany or France. Lapha ungathola amanye amadolobha athuthuke kakhulu eRomania, kodwa futhi nemizana yakudala lapho abantu behlala khona njengoba benzile eminyakeni eyikhulu edlule. ITransylvania izungezwe izintaba zeCarpathian eziyindida futhi iyikhaya lezilwane ezinqabile (amabhere, izimpisi) nezimbali (ama-orchid nezinye izitshalo).
ITransylvania inawo wonke umlando namasiko ahlukahlukene ongawafuna. Umlando weTransylvania uphikiswa kakhulu: uma wawuseyingxenye yoMbuso ka Hungary (950-1526), ​​kwabe sekuyi-Principal ezimele (1526-1690) ngaphambi kokuba iphinde yahlanganiswa uMbuso waseHabsburg. Kwakuhlangene noWallachian noMoldovia bakha iRomania ngemuva kokuba uMbuso wase-Austro-Hungary uchithwe kwisivumelwano se-Triannon, esabona ukuphela kweMpi eNkulu phakathi kweHungary ne-Allies. Lo mlando uyinkimbinkimbi uchaza umehluko omningi wamasiko phakathi kweTransylvania nayo yonke iRomania.
ITransylvania iyisibonelo samaqembu ehlukene ezinhlanga ahlala ndawonye ngokuthula okulinganayo. Kodwa-ke, njengakuqala kweYurophu, ubuzwe baseRoma busebandlululwa kakhulu futhi namasiko abo aqondwa kancane.
Namuhla iTransylvania yisifunda esithuthuke kakhulu eRomania, ngokwengxenye yezokuvakasha nangengxenye ethile yesiko lobungxowankulu eliqine ngaphambi kweMpi Yezwe II. Ukuba khona kweqembu elincane lamaJalimane kanye neHungary kuye kwaba yingxenye yamathonya aseNtshonalanga eTransylvania kusukela nge1989. Kuyathakazelisa ukubheka umehluko phakathi kwalesi sifunda esincane: iNingizimu neNingizimu Melika liphethwe yisiko lamaSaxon, iMpumalanga neNyakatho Ntshonalanga ithonywa kakhulu yisiko laseHungary, iNyakatho ibuye amaSlavic, kanti iNingizimu Ntshonalanga yehlukile futhi. Zama ukuvakashela amadolobhana amadala ambalwa, lapho abantu ngokuvamile benomusa khona.
Izintaba zase-Apuseni, i-Arieseni, iHuedin nemizana eseduze
I-Reezat National Park
ISzeklerland, Târgu Secuiesc, Miercurea Ciuc
Kulezi zinsuku, cishe wonke umuntu eTransylvania ukhuluma isiRomania, noma iningi lamaHungary ezinhlanga - cishe i-20% yabantu, kodwa okuningi ezindaweni ezithile - isiHungary empeleni silulimi lwabo lokuqala. Bambalwa abakhulumi bomdabu baseJalimane, kepha kunoma yiliphi idolobha elikhulu kufanele ukwazi ukuthola abantu abakhuluma kahle isiNgisi, isiFulentshi noma isiJalimane.
ITransylvania kulula ukufinyelela kuyo, ngenxa yokuchuma kwayo ngokomnotho, imboni yezokuvakasha kanye nokuba seduze kweCentral Europe.
Kunezikhungo zezindiza ezintathu eziphambili esifundeni.
ICluj-Napoca International Airport itholakala enyakatho nentshonalanga yeTransylvania. Isikhumulo sezindiza esikhulu kunazo zonke eTransylvania kanye nehabhu lesifunda elivelayo.
ITransylvania iyindawo okufanele ibonwe kubantu abahambayo kule ngxenye yeYurophu. Izitimela ngokuvamile ziyindlela ehamba phambili yokuhamba phakathi kwamadolobha amakhulu eTransylvanian nezindawo zokuvakasha. Kodwa-ke, iningi lezimpawu zesifunda zifihliwe emigwaqweni emikhulu yokuhamba, ngakho-ke kunconyelwa ukuthi uqashe imoto noma uthathe amabhasi uye kulezo zindawo.
Ungathola amamephu emigwaqo amahle futhi anemininingwane kunoma yisiphi isiteshi sikagesi ezweni lonke, eziteshini zezitimela nasezindabeni eziningi zezindaba. Lezi zimephu zomgwaqo ezinemininingwane zingakuholela noma kuphi, ngaphandle kokuholwa kakhulu Qikelela ukuthi imigwaqo esezingeni eliphakeme nephakeme ayimakwa kahle, ngakho-ke kwesinye isikhathi kufanele ucele izinkomba. Abantu bavame ukuba nomusa kakhulu futhi bazokusiza ufike lapho ukhetha khona.
Amabhayisekili ayindlela elula kakhulu futhi eco-friendly yokuhamba eTransylvania futhi ngale ndlela ungabona ubuhle bemvelo futhi uvakashele nemizana emincane kakhulu futhi ekude kakhulu. Qaphela noma ukuthi imijikelezo eminingi ifaka ukuphakama okukhulu, ngakho kufanele usetshenziselwe ukukhuphuka amagquma. Emadolobhaneni akude ungahlala uthole abantu bendawo abazokuthengisa ngentengo ephansi kakhulu: izithelo, imifino, imikhiqizo yobisi, noma noma bakumemele ukudla kwasemini. Amabhayisekili omjaho anamathayi amancane awanconyiwe nokho, ngisho nemigwaqo emikhulu inezinkinga eziningi futhi ezindaweni ezikude kakhulu ozohamba ngazo emigwaqweni ewubhuqu, ngakho-ke kukhethwa ibhayisikili elinamandla lentaba.
Ukuqashwa kwezimoto kulula ukukuthola.
I-Sarmale - inyama ewayinini noma eqabwini liklabishi
UMici - uphawu lweRomania. Kwezinye izindawo kufana nenkemba kune-samurai (kodwa i-tastier).
UCiorba de Burta - isobho (isisu senkomo) isobho. Kunambitheka kangcono kunokuzwakala!
I-Bulz - ushizi nge-polenta (kuphela eTransylvania)
Papanasi - dessert: zama ukuyithanda
Isobho lebhontshisi esinkwa - uzomangala ukusuka ekusebenzeni kuye ekuthandeni ipuleti yakho
AmaKurtos Kalacs - i-dessert, angatholakala ngokuheha izivakashi noma ezindaweni eziseHungary ezisemgwaqweni
I-Ursus Black ubhiya - Indoda ephakathi nendawo, emnyama edla izindwani emnyama ephikiswa phakathi kukandunankulu wase-Eastern Europe
I-Bergenbier - Indawo ecebile yaseJalimane ethandwa kakhulu kulo lonke elaseRomania
Ubhiya obukaStejar - I-7% ubhiya oqinile onokunambitheka okuhlukile
ILacrima Lui Ovidiu - Iwayini elimnandi, elimnandi laseRomania, elitholakala ezitolo ezinkulu ze-20 lei.
IDracula Beer - Ubhiya waseKitsch othengiselwa izivakashi zakwamanye amazwe, ezungeze i-Whe Castle kanye nezitolo ezinkulu, obukhangiswe ngobumnandi bawo obungajabulisi.
I-Ciuc ubhiya - Enye yamabhiya amahle kakhulu ayingxenye yeQembu Heineken
Iwayini elivela esiseleni sewayinini sendawo. Uzowathola kunoma yiliphi idolobha, cela nje i- "crama" (funda: krahmah)
Horinca de Bihor, noma amanye amaTuica. Lolu uhlobo lwendawo. Abantu bendawo abaningi benza uhlobo lwabo lwemvelo nokunambithekayo. Ungayithola endaweni yakini (bayokujabulela ukuba nayo ukunambitha eyabo) nakuma-cellars ewayinini.
ITransylvania akuwona umhlaba wezingozi obulele ekhoneni ngalinye elimnyama. Inesibalo esikhulu seziteshi zamaphoyisa, ngakho-ke uma kukhona okungahambi kahle ohambweni lwakho, usizo luzosondela.
Kufanele uqaphele ukuthenga okungatheni lapho ujikele khona ezindaweni ezivakashile ezivakashelwa ngabavakashi kanye nasemadolobheni ahambela kakhulu, njengeSinaia, kuzoba khona amadoda athile azokuphanga izivakashi. Qaphela i- "maradona".
IMaramures enyakatho, iBanat eningizimu nentshonalanga neCrisana entshonalanga ngokomlando iboshelwe eTransylvania futhi kungaba ukwengeza okuhle kohambo lwakho eTransylvania.
IMoldova ithandwa ngezindela zayo zezindela nemizana emincane.
IDobrogea kulapho ungaya khona ogwini lolwandle Olumnyama.
IBucharest inhloko-dolobha yaseRomania futhi cishe amahora angu-3 kude Brasov.
Eningizimu ye Romania ungabona i-Oltenia eluhlaza kanye nesifunda saseMuntenia.